Top 5 Online Movie si ay u gebogebeeyaan Samee Movie Online for Free
> Resource > Video > Top 5 Online Movie si ay u gebogebeeyaan Samee Movie Online for Free
Maanta dejiyeyaasha kala duwan movie online ayaa diyaar u ah in aad iyo filimada edit oo aan aqoon aad u badan oo ah video tafatirka. Run ahaantii aad u fudud si uu u barto oo fudud in la isticmaalo Waxay. Waa maxay dheeraad ah, uma baahnid inaad si loo soo dajiyo kasta oo ka siib-in ama loo isticmaalo. Halkan waxaan ku talinaynaa 5-dejiyeyaasha movie online ugu wanaagsan oo kaa caawin kara inaad la abuuro wax dhab ahaan taagan. Hadda iska hubi!
Animoto waa aalad kale oo online oo caan u saamaxaya in ay si fudud isu geeyo images, qoraalka, iyo music galay videos internetka ku salaysan. Ka dib markii doorashada sanamyadiinna, qoraalka iyo music, waxay u kordhisaa xuman saamaynta si ay u abuuraan bandhig aad u xiiso badan oo firfircoon. Waxaa dhab ahaan u muuqda xirfad sameeyo. Laakiin waxaad samayn kartaa oo keliya movie 30-labaad lacag la'aan ah. In la abuuro filimada dheer, in aad bixiso $ 30 halkii sanno video abuurka aan xad lahayn oo download.
YouTube ma aha oo kaliya la wadaago goobta video ah, laakiin sidoo kale kaa caawinaysaa in aad u jeedi footage cayriin burburi ku dhameysatay. Waa wax iska fudud si uu u barto, si degdeg ah u isticmaalaan oo quruxsan cabsi badan. Waxa kaliya ee waqtiga track fursad kuu siinayaan, jar aad videos qabsato heerarka, ku dar kala guurka ee aasaasiga ah iyo saamaynta, beddelan aad soundtrack iyo in ka badan.
Sida hore Open Source Online Video Platform adduunka ee, Kaltura siisaa labada heer ganacsi software ganacsiga iyo adeegyada, iyo sidoo kale xalalka beesha taageeray furan-il oo bilaash ah, waayo, video daabacaadda, maamulka, syndication iyo monetization.
Mid ka mid ah Media True
Mid ka mid ah Media True waa codsi ah oo caan ah online for abuuro videos, montages iyo duubey. Upload kuu gaar ah files warbaahinta oo ay isticmaalaan maktabadda ay khayraadka video, waxaad ku dari kartaa saamaynta audio iyo video kala duwan. Waxay leedahay interface cad si aad u fudud u edit karaa videos sida rearranging clips, isaga oo intaa raaciyay kala guurka iyo qoraalka, iyo jarida goobaha aan loo baahnayn. Ka dib markii aad samaysay, oo aad isla wadaagaan kartaa videos on goobaha video qaybsiga kala duwan sida YouTube, Facebook, MySpace iyo TiVo kuu gaar ah channel. Intaa waxaa dheer, waxaa kuu ogolaanaya in aad si aad u dooratid cover DVD gaarka ah ee video.
VideoToolbox waa samaynaysaa a movie awood badan kuu ogolaanaysaa inaad badalo, cut, dalagga, ku milmaan iyo demux video files. Wax baad kaydin karaa 300MB of videos in tababaraha file iyo 700MB xogta ku soo saarka dhawaan ay files.
In kastoo aad si fudud u isticmaali dejiyeyaasha movie online, wax badan oo ka mid ah oo kaliya ayaa bixin hawlaha samaynta video iyo tafatirka aasaasiga ah. Haddii aad rabto in aad sameyso filim xirfad dheeraad ah, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa doorasho wanaagsan. Ma aha oo kaliya in aad awood u jar, ku biiro, gooyay movie laakiin sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku darto saamaynta kala duwan oo aad jeceshahay. Hadda waxa soo dejisan oo ay leeyihiin isku day ah!
Sida loo dar Audio in AVI
Sida loo Download AVI Videos
Sida loo sameeyo a Qalin Video Muqaal
Isticmaal Quick AVI magaabay in yaree AVI Files aan Loss Quality
Sidee ku cadaadisaa Video ah oo la Wondershare Video Converter Ultimate
Jaycut - Sida loo Isticmaalo Free Online Video ayeey Software Jaycut